Isi Mail.ru Mail
Esi mee ka Mail.ru gị webpage
Isi akwụkwọ nke ọrụ Mail.Ru nwere ọtụtụ blocks nke na-enye onye ọrụ ohere inweta ozi bara uru dị iche iche, gbanwee ngwa ngwa gaa ọrụ ndị a mapụtara ma malite ịchọ Internet site na nyocha nke onwe ha. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịhụ ibe a dị ka isi maka ihe nchọgharị gị, soro usoro ole na ole dị mfe.
Wepu aha gị na Mail Mail
Ọtụtụ mgbe, e nwere ọnọdụ mgbe, mgbe ị debanyere ọrụ ọ bụla, onye ọrụ na-edebanye aha na akwụkwọ akụkọ, ma mgbe obere oge gasịrị, ozi a akwụsịtụrụ mmasị na ajụjụ ahụ: etu esi ewepu aha na ụdị spam ọ bụla? Na Mail.ru mail ị nwere ike ime ya dị nnọọ di na nwunye nke clicks. Otu esi ewepu aha na izipu ozi gaa Mail.
Esi mepụta "Mail.Ru Cloud"
Ọrụ Mail.Ru na-enye ndị ọrụ ya nchekwa nchekwa igwe, ebe ị nwere ike ibudata onye ọ bụla faịlụ ruru 2 GB na nha na elu 8 GB na mkpokọta maka n'efu. Kedu esi mepụta ma jikọọ "igwe" a? Ka anyị lee. Ịmepụta "Ígwé ojii" na Mail.Ru Jiri ụlọ ọrụ data dị n'ịntanetị na Mail.
Otu esi eji mail Mail.ru
Ọtụtụ mgbe enwere ikpe mgbe ọ dị mkpa ịdebanye aha na saịtị ọ bụla iji budata faịlụ ma chefuo ya. Mana iji mail ndị bụ isi, ị debanyere aha na akwụkwọ akụkọ ahụ site na saịtị ahụ wee nweta ụyọkọ ozi na-adịghị mkpa ma na-enweghị mmasị na-edeba igbe igbe. Ozi.
Web [email protected] bụ ọrụ nke Mail.ru, na-enye ndị ọrụ ohere ịjụ ajụjụ na ịza ha. Taa, ihe ruru nde mmadụ isii na-eleta ya kwa ụbọchị. Isi echiche nke oru a bụ iji kwụọ ụgwọ maka amaghị ajụjụ nke ajụjụ ọchụchọ maka ekele nke ndị ezigbo ọrụ. Site na ntọala ya, ya bụ 2006, ọtụtụ ozi bara uru ejirila na saịtị ahụ, nke onye ọrụ ọ bụla nwere ike mejupụta site n'ịghọ onye na-ebido isiokwu ọhụrụ.
Esi tinye mail gị na Mail.Ru
Email sitere Mail.Ru bụ otu n'ime ọrụ ndị kachasị ewu ewu na runet. Kwa ụbọchị site na ya na-emepụta ọnụ ọgụgụ nnukwu igbe, ma ndị ọrụ nchịkọta nwere ike ịnata ụfọdụ nsogbu na ikike. Ụzọ ịbanye Mail.Ru Mail Binye n'ime mail gị Mail.
Esi ehichapụ akwụkwọ ozi na Mail.ru mail
Ọtụtụ ndị ọrụ nwere mmasị na otu esi ehichapụ ozi-e niile n'otu oge. Nke a bụ ajụjụ dị mkpa, karịsịa ma ọ bụrụ na i jiri otu igbe ozi ịdebanye aha na ọrụ dị iche iche. N'okwu a, ozi gị na-aghọ ihe nchịkọta nke ọtụtụ narị ozi spam na ihichapụ ha nwere ike iwe ogologo oge ma ọ bụrụ na ị maghị otú e si kpochapụ folda ozi-e.
O nwere ike ịdị mkpa iji iweghachite leta Mail.Ru na ọtụtụ akwụkwọ. Ruo ugbu a, ọrụ ahụ adịghị enye aka a kpọmkwem, nke bụ ya mere naanị ngwọta bụ onye ahịa email abụọ ma ọ bụ ọrụ ọrụ ozi ọzọ. Anyị ga-agwa ma nhọrọ abụọ. Cheta ozi ịntanetị na Mail.
Kedu esi eziga email na Mail.ru
Ọ ga - adị ka ọ ga - esiri gị ike iziga akwụkwọ ozi. Ma n'otu oge ahụ, ọtụtụ ndị ọrụ nwere ajụjụ banyere otu esi eme nke a. N'isiokwu a anyị ga-enye ntụziaka, ebe anyị ga-akọwa n'ụzọ zuru ezu otu esi dee ozi site na iji ozi Mail.ru. Mepụta ozi na Mail.ru. Iji malite ozi, ihe mbụ ị ga - eme bụ ịbanye na akaụntụ gị na ebe nrụọrụ weebụ Mail.
Naghachi na ehichapụ mail Mail.Ru
Ruo ugbu a, naanị ọrụ mail na-enye ike iji nweta akaụntụ ehichapụ, gụnyere Mail.Ru. Usoro a nwere ọtụtụ ihe dị mkpa, nke ọ bụla ga-atụle tupu ya ewepu igbe ahụ. Na ntuziaka a, anyị ga-ekwu banyere ụzọ nke ịmegharị ọrụ akaụntụ.
Nkọwapụta okwu paswọọdụ site na Mail.ru
Ndị na-emepụta okwu ntanetị mepụta mmekọrịta siri ike nke ọnụ ọgụgụ, mkpụrụedemede ukwu na obere akwụkwọ nke mkpụrụ okwu Bekee na akara dị iche iche. Nke a na - eme ka onye ọrụ ahụ dị mfe iji tinye paswọọdụ nke mgbagwoju anya iji jide n'aka nchebe nke akaụntụ ya. Ụlọ ọrụ na-ewu ewu Mail.ru na-enye gị ohere ịmepụta paswọọdụ dị otú ahụ iji meekwu ihe na saịtị ọ bụla.
Ịtọsa ọkwa SMS na Mail.ru
Ntughari ozi SMS bụ ihe dị mma nke na Mail.ru na-enye anyị. Ị nwere ike iji ya mara mgbe niile ma ọ bụrụ na ị ga-enweta ozi na mail. Ozi SMS a nwere ụfọdụ data banyere akwụkwọ ozi ahụ: onye ọ bụ na isiokwu ọ dị, yana njikọ ebe ị nwere ike ịgụ ya kpamkpam.
Ịmepụta Mpempe akwụkwọ Ozi Nkwado Mail.Ru Mail
Mail.ru Ozi ozi na mpaghara Russian nke na-ekwu okwu na Ịntanetị bụ otu n'ime ndị kasị ewu ewu, na-emepe adreesị ozi-e a pụrụ ịdabere na ya na ọtụtụ ọrụ. Mgbe ụfọdụ, enwere ike inwe nsogbu dị iche iche na ọrụ ya, nke a na-agaghị edozi n'enweghị enyemaka ndị ọkachamara na teknụzụ.
Mail.ru Mail adịghị emepe: Ndozi nsogbu
Ọ bụ ihe nzuzo na Mail.ru Mail adịghị ike. Ya mere, enwere mkpesa site n'aka ndị ọrụ banyere arụ ọrụ na-ezighị ezi nke ọrụ ahụ. Mana ọ bụghị mgbe niile nsogbu nwere ike ibili n'akụkụ Mail.ru. Ụfọdụ njehie ị nwere ike idozi onwe gị. Ka anyị leba anya otu ị ga-esi nweta ozi email ị ga-arụ ọrụ.
"Cloud Mail.Ru" na-enye ndị ọrụ ya nchekwa igwe ojii dị mfe, na-arụ ọrụ maka nyiwe dị iche iche. Ma ndi oru novice nwere ike inwe nsogbu di iche iche n'inweta omuma na oru ya. N'isiokwu a anyị ga-emeso ihe ndị bụ isi nke "Ígwé ojii" site na Mail.
Ntughachị si na Mail.ru mail
N'ụzọ dị mwute, ọ dịghị onye ọ bụla na-enweghị ike ịbanye na ịnweta "igbe" igbe. Nke a ga-ekwe omume ma ọ bụrụ na mmadụ achọta data gị na ị na-eji abanye na akaụntụ gị. N'okwu a, ị nwere ike ịlaghachi na email gị, naanị site na ịghaghachi paswọọdụ. Na mgbakwunye, ozi a nwere ike ịdị mkpa ma ọ bụrụ na ịchefuru ya.
Mail.ru Mail Setup na Windows
Iji rụọ ọrụ na ozi ndị na-abanye na akaụntụ Mail.ru gị, ị nwere ike ma kwesị iji software pụrụ iche - email ahịa. A na-etinye ihe omume dị otú ahụ na kọmputa onye ọrụ ma na-enye gị ohere ịnata, zipu ma chekwaa ozi. N'isiokwu a, anyị ga-eleba anya iji setịpụ ahịa email na Windows.
Ịmepụta email na Mail.ru
Otu n'ime ọrụ ndị kachasị ewu ewu nke na-enye ike ịmepụta igbe akwụkwọ ozi bụ Mail.ru, ndebanye aha anyị ga-agwa gị n'okpuru ebe a. Esi enweta ozi igbe na Mail.ru Ịdenye akaụntụ na Mail.ru agaghị ewe oge na mgbalị. Ọzọkwa, na mgbakwunye ozi, ị ga-enweta nnukwu netwọk mmekọrịta ebe ị nwere ike ikori, lee foto na vidiyo nke ndị enyi, kpọọ egwuregwu, ma nwee ike iji ozi Mail Mail.
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị chefuru nbanye Mail.ru
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ị chefuru paswọọdụ gị site na Mail.ru email igbe, n'ezie. Ma nke a bụ ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na akaụntụ nbanye ahụ furu efu? Ihe ndị dị otú ahụ abụghị ihe ọhụrụ, ọtụtụ ndị amaghịkwa ihe ha ga-eme. E kwuwerị, bọtịnụ pụrụ iche, dị ka ọ dị na paswọọdụ, abụghị ebe a. Ka anyị lelee otu ị ga-esi nweta ohere ịnweta ozi echefu echefu. Hụkwa: Nweghachite Paswọdu na Mail Mail.
Otu esi enwetaghachi ozi ịntanetị na Mail.ru
Ọtụtụ na-eji ozi-e ekwurịta okwu na ndị ọrụ na ndị enyi gị. Ya mere, na igbe ozi igbe nwere ike ịbụ ọtụtụ data dị mkpa. Mana mgbe enwere ọnọdụ mgbe onye ọrụ nwere ike ihichapu akwụkwọ ozi site na ndudue. N'okwu a, ị gaghị atụ egwu, n'ihi na mgbe mgbe ị nwere ike iweghachi ozi ehichapụ.
https://termotools.com ig.termotools.com © Mail.ru Mail 2020